The Gardener: 2011-11-27
စိတ်ချမ်းသာရေးအတွက် Tips and Tricks
ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီ blog မှာ မြင်တွေ့သိရှိနေကြတာသုံးနှစ်ကျော်သွားပြီ။
ဒီမှာတော့ ကတ္တရာပုံးထဲဝင်ထိုင်နေတဲ့ကျွဲမည်းမည်းကြီးတွေလို လေးနက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးတွေ တကယ်ကို မရှိတာအသေအချာပါပဲ။
ကြီးလာလေ ပေါ့ပါးတာတွေစိတ်ဝင်စားလာလေပဲ။ ခေါင်းကလည်းမကောင်းတော့ဘူး။
ကလေးတွေဖတ်ဖို့ ရေးတာ လာဖတ်တဲ့လူကြီးတွေရှိရင်လည်း ကလေးတွေဖတ်ဖို့ရေးတာလို့ နှလုံးသွင်းပြီးဖတ်ပါ။ နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲမှာတော့/နှစ်လုံးသွင်း/ တယ်ဆိုရင် 2-0 နဲ့နိုင်တာပါပဲ။ နှလုံးသွင်းမှန်တယ်ဆိုတာ ဘာသာရေးစကားအရဆိုရင်တော့ စိတ်ထားမှန်မှန်ထားနိုင်တာပါပဲ။ ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ကောင်းကောင်းထားပြီး၊ သာသာယာယာနေတာကိုပဲ နှလုံးသွင်းမှန်တယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့်ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးဆိုရင် လမ်းပေါ်မှာ ကပြီးပြေးနေလည်း တင့်တယ်တာပါပဲ။
လူတွေဟာ အသက်ကြီးလာရင် အသက်ရဲ့ တားဆီးမှုကိုခံရတယ်။
သိပ်မပေါနဲ့ အသက်ကိုလည်းကြည့်ဦးဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်က ပြန်ပြန် ဆရာလာလုပ်နေတာကို အတော်တွန်းလှန်ရမယ်။ အမှန်က အသက်ကြီးလာလေ၊ သဘာဝကျကျနေဖို့ကောင်းလေပဲ။ မြက်ခင်းပေါ်မှာ ငယ်တုန်းကလှဲချပြီး အိပ်နေသလို၊ တစ်ခါတစ်လေ အဆင်ပြေတဲ့မြက်ခင်းရှာပြီး လှဲအိပ်ပါ။ ပိုက်ဆံပေါရင် စင်ကာပူ ဂေါ့ဖ်ကွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်သွားလှဲနေပါ။ ပါးစပ်မဟထားမိရင် ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
အပိုတွေမလုပ်နဲ့တော့။ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တွေ လုပ်မနေနဲ့။ အသက်ကြီးလာပြီ။ ကိစ္စနည်းအောင် အပိုမလုပ်တာကောင်းတယ်။ လူမှုရေးကိစ္စတွေသိပ်အများကြီးလုပ်မနေနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အေးအေးနေတတ် အောင်လုပ်ထားတာကောင်းတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို ခင်တယ်ဆိုတာလည်း သူတို့မရှိရင် မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုး မဖြစ်အောင်သတိထားဖို့လိုမယ်။ တစ်ယောက်တည်းလည်းအဆင်ပြေပြေ မပျင်းမရိနေနိုင်ရင်ကောင်းတယ်။ အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချပါ။ charity အလုပ်တွေလုပ်ပါ။ မလုပ်နိုင်ရင် လုပ်နေတဲ့သူတွေကို အားပေးပါ။
အဲဒီသဘောထားကို ငယ်တုန်းကတော့ ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ တကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားတော့ ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာတွေ နည်းမှမနည်းဘဲ။ ဘာအသုံးကျလဲဆိုရင် ဘာမှအသုံးမကျဘူး။ အခုလည်း နေ့တိုင်းလည်းဖတ်နေတာပဲ။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ သတင်းတွေ ဒီလောက်မလိုတော့ဘူး။ သတင်းတွေ များများသိတာဟာ စိတ်ချမ်းသာဖို့ အထောက်အကူမပြုလှဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းဟာလည်း စိတ်ထဲ အမှိုက်ပွရုံပဲ။ သတင်းတွေကို လျှော့ပြီး စိတ်ကို အလွတ်အတိုင်းလေးထားဖို့လည်း ကြိုးစားသင့်တယ်။
အဲဒါကတော့အတော်လေး အရေးကြီးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အားလပ်ချိန်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကို Temple Run Game မှာပြေးနေတာ တစ်ပတ်ရှိပြီ။ နောက်ဆုံး point5သန်းတစ်ခုပဲ နိုင်စရာကျန်တော့တယ်။ မနေ့ည ၄.၅ သန်းရပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ပတ်ကုန်ရင် ဂိမ်းဆော့စရာအချိန်လည်းသိပ်မလိုတော့ဘူး။ ပိုလာတဲ့အချိန်တွေကို အပြင်မှာ တကယ်ပြေးမလားလို့စဉ်းစားရင်း မောမောနေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်တာဟာ တစ်သက်လုံးသင်ယူရမယ့်အရာပါပဲ။ General Rule ကတော့ စိတ်ချမ်းသာတဲ့နေရာမှာ အချိန်များများသုံးထား။ ရုတ်တရတ် ခေါက်ခနဲသေတဲ့အခါကြရင် အင်မတန် တာသွားမယ်။
စိတ်ထားကောင်းတယ်ဆိုတာက လုပ်ယူလို့ရသလားမရသလားတော့မသိဘူး။ စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူအများစုက ပင်ကိုယ်ကောင်းတာ။ စိတ်ထားပင်ကိုယ်မကောင်းတဲ့သူတွေကြတော့လည်း အော်ဆိုးတာ။ (အော်ရီဂျင်နယ်ဆိုးတာ)။ ကလေးတွေတောင်မှ မုန့်ကျွေးပြီး ပြန်တောင်းလို့ရတဲ့ကလေးဆိုမှ စိတ်ထားကောင်းတယ်။ ပြန်မပေးတဲ့ကလေးဆိုရင် မွေးရာပါ တွန့်တိုတဲ့ကလေးတွေ။ အဲဒီလိုကလေးတွေတွေ့ရင် မုန့်ကို ပြန်လုလုမိနေတတ်တယ်။
အချိန်ပိုထားပါ။ အချိန်ဆိုတာ စိတ်ချမ်းသာဖို့ နည်းနည်းတော့ အပိုရှိမှဖြစ်မယ်။
အလုပ်ကို ၁၂ နာရီလောက်လုပ်ရတဲ့အခါ လူက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သိချင်လည်းသိမယ်၊ မသိချင်လည်းမသိဘူး။ စိတ်ကတော့ အတော်လေး ပင်ပန်းသွားပြီ။ လူဆိုတာ မွေးရာပါ သဘာဝတရားကိုကြိုက်တယ်။ အခု အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ အနေအထားဟာ အတော်လေးကို သဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်။ ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ အတိုင်းအထွာတွေ၊ အချက်အလက်တွေကို အာရုံပြုရလွန်းတယ်။ လူ့သဘာဝအရ ဒါတွေကို လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ပိုက်ဆံရဖို့သာလုပ်ကြရတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် စိတ်ကို လှည့်ဖြားထားပြိး ညာခိုင်းနေရတာ။ စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားကို ကျော်လာပြီဆိုရင် စိတ်ကိုက လေလာတယ်။ မပြီးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့သာ ဖျစ်ညှစ်လုပ်ရင်းနဲ့ tension များလာတတ်တယ်။ အချိန်မီမလျှော့ရင် ဇက်ကြောတက်မယ်။ မျက်လုံးကိုက်မယ်။ စိတ်ရော လူပါ အညောင်းမိမယ်။ စိတ်တိုလာမယ်။ ကမ္ဘာမှာ အလုပ်များများပိုလုပ်တဲ့သူက ပိုက်ဆံများများပိုရတာမဟုတ်မှန်း ကျွန်တော်တို့သိကြတာကြာပြီ။ ဒီအလုပ်ကိုပဲ ပိုက်ဆံပိုပေးတဲ့ နေရာမှာပိုပေးပြီး လျှော့ပေးတဲ့နေရာက လျှော့ပေးတယ်။ I.T သမားတွေဟာ ကြွယ်ဝချမ်းသာဆိုတဲ့နေရာကို ရောက်သွားနိုင်တဲ့သူ အရှားဆုံး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်။ လူတန်းတောင် စေ့တဲ့သူစေ့တယ်။ မစေ့တဲ့သူမစေ့ဘူး။ အလုပ်ချိန်ကြတော့ နှစ်ဆပိုများတယ်။ အဲဒီလို ဘ၀တူတွေကို အင်မတန်စာနာပါတယ်။ အနားယူပါ။ အနားယူတယ်ဆိုတာ လူ့သဘာဝရဲ့ လိုအပ်ချက်ပဲ။ ခရီးသွားပါ။ စိတ်ကို အလုပ်ကနေ လုံးဝခြားနားတဲ့နေရာတစ်ခုကို ခေါ်သွားပါ။ ဥပမာ၊ အိမ်ပြန်လို့မရသေးရင် facebook က home ကို အကြိမ်တစ်ရာလောက် နှိပ်ကြည့်ပါ။ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ ဘာကိုမှ ခံစားနေတာမရှိဘူး။ ဘာမှ မလုပ်ရဘဲ စိတ်ချမ်းသာနေတာ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘာမှလည်း မလိုချင်ဘူး။
အဲဒီချမ်းသာနေတဲ့စိတ်ကို ကြည့်ပြီးတော့ တကယ်စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာကိုမှ လိုချင်စိတ်မရှိပါလားဆိုတာကို လေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်သွားတယ်။ (စိတ်ချမ်းသာဖို့လိုရင်းပါ။ pg. 65)
ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာတော် သဘောပေါက်သွားတာပါ။
ပို့စ်တွေ နေ့တိုင်းရေးနေတယ်ဆိုလို့၊ မအားလည်းရေးပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေများအောင် စိတ်ချမ်းသာစရာတွေများများရေးပါတယ်ဆိုပြီး ပြန်ပြောခဲ့သေးတယ်။ လူတွေစိတ်ချမ်းသာတာဟာ စိတ်ဆင်းရဲနေတာထက် အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။
စာတစ်ခုကို ငါးမိနစ်ခွဲလောက်ဖတ်ပြီးလို့မှ အချိန်ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်ဆိုရင် မဖတ်တာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ကြီးရဲ့ အဖိုးတန် ငါးမိနစ်ကို ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာစရာကိစ္စတစ်ခုမှာ ပျော်ပျော်ကြီးသုံးလိုက်ရတာကမှပိုတန်ပါဦးမယ်။ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားရတာက အလုပ်မှာစိတ်ပင်ပန်းတဲ့သူတွေ ဖတ်လိုက်ရင် စိတ်သက်သာအောင်ပါ။
အနည်းဆုံး စိတ်ချမ်းသာဖို့ကို တစ်နေ့ကို တစ်နာရီလောက် အချိန်ပေးပါ။ အဲဒီတစ်နာရီမှာတော့ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်နေပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ဘ၀ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဘ၀တော့ရှိတယ်၊ တခြားသူတွေအတွက်ပဲနေပေးလိုက်ရတဲ့ဘ၀ဖြစ်သွားရင် လူဖြစ်ရှုံးတယ်ခေါ်ရမယ်။
လူဖြစ်မြတ်ကြပါစေ။ လူဖြစ် အရင်းပြန်ရကြပါစေခြင်းအကျိုးငှာ ...............။
Adsense ထည့်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဘေးနားမှာ တခါတလေ ကြော်ငြာတွေပေါ်ပါမယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ကြော်ငြာတွေကို ကလစ်ခေါက်တော်မူနိုင်ပါတယ်။ စိတ်မ၀င်စားတဲ့ကြော်ငြာတွေကိုလည်း စေတနာဗလပွထားပြီး ကလစ်ခေါက်သွားပေးဖို့မလိုပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဗျစ်တရှမဟုတ်တဲ့အတွက် မျိုးချစ်စိတ်တခွဲသားကြီးနဲ့ ဗျစ်တရှလို ရေးဖို့ မကြိုးစားမိပါဘူး။ ပို့စ်ထဲမှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာလုံး အနည်းငယ်ပိုအသုံးပြုမိဖို့ ကြိုးစားမယ်လို့လည်း /သံနိတ်ထန်/ မချထားပါဘူး။
Labels: Inner Peace, Peace around us, Peace within, Peaceful lifestyle
dreams ...inside dreams...
sometimes two-layer, sometimes three.
I often dreamed multilayered dreams now and then
Outside ofadream also can be inside of another dream.
The dream we love can be bounded by another dream we hate.
Life is likeaseries of dreams woven nicely or sadly.
We don't know what is the reality. To simplify the statement, we cannot differentiate what is the reality in the dream and what will be outside these dreams. Will there beabig dream that can swallow up the big reality we believed in? Living seriously in the dreams make us dreamers. Dreamers never rethink about the reality again. Realities in dreams also are virtualities in deed. We cannot avoid these kinds of dreams and dream-related pains.
We are happy when we escaped fromabad dream. Actually, the bad dream isapiece ofareality, although we feel safe inside the dreams, may be hypothetically.
Do we really want to escape from dreams though they are the best places for us to be relaxed and peaceful. Parallel realities are around us. Gigantic Dreams are evolved day after day to make us safe as we wish. The best dream can be our aim. Realities are not that important to the dreamers.
Waking up from series of dreams makes me think I am still insideabig dream.
Indecisive, confused ....
still in peace asadreamer.
My FB status,
quite long huh?
duh quite long really.. :P
Labels: dreams, Simple Thoughts
ပူဖောင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ငယ်ကတည်းက ဆော့လာကြတဲ့ လေမှုတ်ပူဖောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၃၀ ပြည့်ခါနီးအထိ ဘ၀မှာ ကျောင်းသားအသစ်လိုဖြစ်နေတုန်းပဲ။ အခုလည်း ပူဖောင်းမှုတ်နေပါသတဲ့။
ပူဖောင်းတွေကို မှုတ်ကြည့်ရင် အတိုင်းအတာကိုသိရတယ်။
သူ့ရဲ့ maximum အရွယ်အစားအထိမှုတ်လိုက်ရင်၊ မကြာခင်မှာပဲ ပေါက်တာပဲ။
အဲဒီလို ချန်ထားရင် ပူဖောင်းကတော့ နည်းနည်းသေးသွားမယ်။
အချင်း ကုလားမတို့ ... အဲလေ.. ကာလာမတို့ ..........၊ အဲဒါကလည်း သိပ်မဆီလျော်ဘူးနော်။ အို အေသင်တိုင်းသူပြည်သားတို့ ... (ဒါကလည်းမနိပ်ဘူး။) အို အောဖလိမြို့သားတို့ ..... ( ပရောဖတ်သိပ်ဆန်နေတယ်)....
ထားလိုက်ပါတော့ ... စကားဦးသန်းလို့မရတဲ့အတူ .... တဲ့တိုးပြောလိုက်တာကောင်းပါတယ်။
ဘ၀မှာလည်း ပူဖောင်းလိုပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ အချိန်တွေကို အပြည့်အသိပ်လုပ်လွန်းရင် ပေါက်ထွက်ကုန်မယ်။ အလုပ်ဆိုတာ ဒီနေ့နောက်ဆုံး မဟုတ်သေးဘူး။ (မနက်ဖြန် ပင်စင်ယူတော့မယ့်သူတွေ မဖတ်မိပါစေနဲ့) နောက်လည်းလုပ်ရဦးမှာ။ နည်းနည်းလေး နေရာလွတ်လေးပေးပါ။ စိတ်ကို နည်းနည်းလေး သက်သက်သာသာထားပါ။ စိတ်သက်သာအောင်ထားပါဆိုမှ အလုပ်မှာ အချောင်ခိုမယ်ဆိုတဲ့ တလွဲဆံပင်ကောင်းတွေကိုလည်း အချောင်ခိုဖို့မတိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်သိပ်များနေပြီး အိမ်မက်ထဲမှာပါ အလုပ်တွေ ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ အိုဗာတိုင်ကြေးမရဘဲ စိတ်က overused ဖြစ်နေပြီဆိုတာကို သတိပြုမိသင့်ပါပြီ။ ရောဂါတွေ အလုပ်က ရလာရင် အလုပ်ကပေးထားတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ပြန်ကုလို့ လောက်ချင်မှလောက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို သေချာစဉ်းစားပါ။
ပူဖောင်းကို အပြည့်မှုတ်ထားတဲ့လူတွေအတွက် ဆရာတော်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ များများလုပ်ရင် မြန်မြန်သေမယ်တဲ့။ အတော်လေးရှင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ Lifestyle ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ သက်တမ်းကို ပြဌာန်းနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ကို လုပ်ရင်လည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ပါ။
အလုပ်အကြောင်း များများပြောတဲ့သူဟာ ဘ၀မှာ အတော်အရှုံးကြီးရှုံးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ရတာသိပ်ဝါသနာပါလွန်းလို့ပြောတာဆိုရင်တောင် နားထောင်ရမယ့်လူရဲ့ အရိပ်အကဲကိုကြည့်ပြီး သင့်ရုံလောက်ပြောပါ။ လူတိုင်းမှာ အချိန်နည်းနည်းပဲရှိတယ်။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ၁၁ နာရီ ၀န်းကျင်လောက် ရုံးမှာသုံးပြီးပြီ။
ကျန်တဲ့အချိန်တွေကို ရုံးကိစ္စမဟုတ်တဲ့ စိတ်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်တွေ၊ ကုသိုလ်ရပြီး ပျော်စရာကောင်းတာတွေမှာ သုံးမယ်ဆိုရင် အသက်ကြီးလာလေလေ စိတ်ချမ်းသာလေလေဖြစ်နိုင်မှာအမှန်ပါပဲ။
အခုတလော စင်ကာပူရုံးတွေမှာ ယောဂတွေဘာတွေ ရုံးအဆင်းမှာ သင်တန်းပေးတယ်။ ပေးတာကလည်း တခြားနေရာဟုတ်ရိုးလား။ Cubicles တွေဘေးတင်လေ့ကျင့်ရတာ။ တော်တော်မဆီလျော်တဲ့ အိုင်ဒီယာပဲ။ တကယ်ဆိုရင် ရုံးကလူတွေကျန်းမာစေချင်ရင် ရုံးစောစောလွှတ်ပြီး သူ့ဘာသာသူ ယောဂသင်တန်းတက်ပစေပေါ့။ အခုတော့ ရုံးမှာကလည်း သေမတတ်ပင်ပန်းတဲ့သူဆိုရင် ယောဂကလည်းပင်ပန်းနဲ့ စောစောသေဖို့ရှိတယ်။
စင်ကာပူမှာ Depression rate မြင့်လာတာဟာလည်း အဲဒီ ရုံးချိန်တွေ များလွန်းတာကြောင့်ပါပဲ။ အတုခိုးမှားပြီး အလုပ်ပဲလုပ်ဖို့မွေးလာတဲ့ဂျပန်ကို အတုခိုးတော့ MRT ကအစ ဂျပန်ဆန်ဆန်ကြပ်လာပြီး၊ အလုပ်ချိန်ကတော့ ဂျပန်နဲ့တန်းတူဖြစ်လာပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားနှုန်းကျတာလည်း ထပ်တူပဲ။ ဂျပန်ရဲ့တစ်ဝက်လောက်ပဲ လစာပေးနိုင်တာကတော့ အတော်လေး ရှော်တဲ့ကိစ္စပါ။
အခုဆိုရင် ရှေ့နှစ်မှာ စီးပွားရေးတွေနှေးမယ်၊ အကျအရှုံးရှိမယ်ဆိုတာတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ MAS ကို အလေးထားလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ မနေ့က လီးရှန်းလွန်းရဲ့စကားမှာလည်း ကြိုးစားကြမယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။ မထိခိုက်ဘူးလို့တော့ သူလည်း အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက် အဆုံးအရှုံးကို ခန့်မှန်းလို့မရသေးပါဘူး။ သေချာတာကတော့ ရှေ့နှစ်ဟာ ပျော်စရာစီးပွားရေးနှစ် မဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒါတွေကို သိထားပြီး စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ လုပ်စရာရှိတာကိုလုပ်ဖို့ပါပဲ။ အချိန်တန်ရင် company လည်းပျက်ချင်ပျက်မယ်။ ကိုယ့်မှာ ရုံးကြောင့် ရောဂါမရဖို့ ပူဖောင်း သိပ်အကြီးကြီး မမှုတ်မိဖို့ သတိပေးရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာရေးဟာ ကျန်းမာရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ လစာဟာ အဲဒီအရာနှစ်ခုရဲ့ နောက်မှာပဲ အမြဲ အရေးကြီးသင့်ပါတယ်။
Rule No1: စိတ်ချမ်းသာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးကို လခနဲ့မလဲပါနှင့်။
၉ နာရီကနေ ၆ နာရီ အလုပ်ချိန်ကို ဆန့်ကျင်သူ။
၁၀ နာရီကနေ ၅ နာရီ အလုပ်ချိန်ကို ထောက်ခံသူ။
Work hard is not as valuable as work smart.
Longer work hours doesn't mean your company is progressing, booming but it just means the staffs' life-span is constantly decreasing according to the extra work hours.
Alicia Keys can lead to ပဲအိုး 2။
Alicia keys အသံသည် jazz ပီယာနိုနှင့် လိုက်ဖက်။
လွင့်မျောနေသော ခံစားချက်ရသများ .........။
မိန်းမရေ ... ပဲအိုးတူးသွားတယ် ကွာရ်။ ။
Rule No1:။ ။ ဟင်းအိုးကြည့်နေစဉ် သီချင်းနားမထောင်ပါနှင့်။ အထူးသဖြင့် R&B
Notes: ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးအားသတိရ။ သူသည်လည်း 26060။ တူး ဝေေ၀။ ဟင်းချက်လျှင်တူးပြီး၊ ထမင်းချက်လျှင်ဝေသည်။ ငါသည်လည်း မျိုးရိုးဂုဏ်စောင့်ထိန်းသူပေတကား။ ပဲအိုးလျှင်တူးပြီး၊ နွားနို့လျှင် ဝေစေအံ့။
Labels: 26060, chef experience, harmful RnB